Ingxenye: Indlela yokuphila 2022 Julayi
Indlela yokuphila 2022, Julayi
Ungamangaza kanjani umama ngoSuku Lomama: Imibono yesipho se-TOP-9 engeke imshiye engenandaba (2022)
Ihlobo elihle: indlela yokusebenzisa isikhathi esingcono kakhulu sonyaka ngenzuzo nenjabulo (2022)
Ngesitayela esithi "Ubuhle Nesilwane": I-Darynok izogubha uSuku Lwezithandani (2022)
I-TOP 3 Wet Premium Cat Foods: Izinga lango-2021 (2022)
Ikhwalithi ephezulu yokudla okumanzi okuphelele kwamakati kunokwakheka okunokulinganisela futhi kungasetshenziswa njengokudla okuzimele
Izitshalo ezi-7 ezinhle zasendlini ezizothuthukisa umoya wasendlini (2022)
Amamuvi we-Halloween: Izinketho ezi-4 ezihamba phambili zesimo samaholide (2022)
Lawa mafilimu azokusiza ukuthi ungene esimweni samaholide, ngisho nangaphandle kwezingubo zokugqoka ezinetimu nokuphatha
Uma iwashi limiselwe isikhathi sasebusika (2022)
Indlela yokuhlobisa indlu yakho nge-Halloween: Imibono engu-13 esheshayo nelula (2022)
Uyafuna ukugubha i-Halloween 2021 ngokumamatheka nezinto ezikhanyayo? Imibono yethu elula izokusiza ukuhlobisa ikhaya lakho futhi wenze iholidi libe mnandi
Imibono engu-14 elula yokuthi ungayihlobisa kanjani i-Halloween nengane yakho (2022)
Ingabe ufuna ukuzijabulisa kwe-Halloween 2021? Bese ubona ukuthi yimiphi imisebenzi yezandla ezithakazelisayo ongayenza ngezandla zakho nengane yakho
ULwesine Olukhulu 2021: lokho ongakwenza nongakwazi ukukwenza ngalolu suku (2022)
ULwesine Olukhulu lwango-2021 lubaluleke kakhulu Evikini Elingcwele kanye neholide lokuqala elihlotshaniswa nePhasika. Ongakwenza ngoLwesine Oluhle nokuthi yini ongafanele ukwenze ngoLwesine Olukhulu - funda endabeni yethu
Izinto eziyi-10 ezenqatshelwe ngesikhathi seLent (2022)
Indlela yokuhlobisa amaqanda ngePhasika: Imibono emi-5 ethokozisayo ozoyithanda (2022)
Intwasahlobo ihlotshaniswa neholide lePhasika. Bona ukuthi ungawahlobisa kanjani amaqanda ama-Easter amahle futhi asekuqaleni ukuze uthole isimo sentwasahlobo
I-Shrovetide 2021: izimpawu, amasiko kanye nokwenqatshelwa (2022)
Inini i-Maslenitsa ngo-2021, yiziphi izimpawu namasiko aseMaslenitsa, yini engenziwa futhi engenziwa eMaslenitsa - siyatshela
Imibono engu-7 yokuhlobisa ifulethi lakho nge-Halloween (2022)
Maduze sizobe sigubha amaholide ajabulisayo hhayi nakancane athusayo, i-Halloween All Saints Day. Ukuze uzicwilise ngokugcwele emkhathini, ungakwazi ukuhlobisa ifulethi ngamasu ahlukahlukene angaqondakali kanye nabathakathi. Kanjani? Bona imibono yethu
Indlela yokupheka ama-pancake amnandi kakhulu e-Shrovetide: amathiphu awusizo (2022)
Ngo-2021, iMaslenitsa iqala ngoMashi 8 futhi iqhubeke kuze kube uMashi 14. Sabelana ngezimfihlo zokwenza ama-pancake amnandi e-Shrovetide, futhi sikutshele ukuthi ungawadla kanjani ngendlela efanele
Amaqiniso angu-5 mayelana ne-Maslenitsa athakazelisayo ukuwazi (2022)
I-Maslenitsa 2021 iqala ngoMashi 8 futhi iqhubeke kuze kube nguMashi 14. Yimaphi amaqiniso athakazelisayo mayelana ne-Shrovetide okudingeka ukwazi - funda endabeni yethu
Ihhotela elisha eTurkey, lapho izihlabani zebhizinisi zombukiso ziphumula khona: yini elenza lihluke (2022)
Ihhotela likanokusho le-deluxe i-NG Phaselis Bay livuliwe ogwini lweMedithera e-Antalya. Wagcwalisa ngokuvumelana futhi wahlobisa isimo esihle saseTurkey, ehlanganisa konke okudingekayo ukuze uthole injabulo. Lapha, yonke isentimitha igcwele uthando nokunakekelwa
Yini ongakayiboni eTurkey okwamanje? Izindawo ezingamangaza abahambi abanamava kakhulu (2022)
I-Turkey ayilona nje ulwandle namabhishi amangalisayo, kodwa futhi izintaba, izindawo zokungcebeleka eziphumulele nezipholile kakhulu, futhi-ke, izigodi ezinhle lapho amabhaluni omoya ashisayo endizela khona ekuseni
I-Autumn Istanbul ngesikhathi sokuhlukaniswa: kungani kufanele uhambe manje? (2022)
Ake siqale ngento esemqoka: awudingi ukwenza ukuhlolwa kwe-covid-19 ukuze uye eTurkey. Lapho ubuyela e-Ukraine, akukho lutho oludingekayo. Okusho ukuthi, kuncane, thenga amathikithi bese ubhukha ihhotela
Yini ejwayele ukunikeza ngePhasika: imibono engcono kakhulu yazo zonke izikhathi (2022)
I-Easter iholide elijabulisayo neliqhakazile. Izipho ezincane zomndeni nabangane, ongayenza ngezandla zakho noma uzithenge esitolo, zizosiza ukwenza i-Easter ibe mnandi nakakhulu
Ukulungiselela iPhasika: Imihlobiso yasekhaya ye-DIY yeholide (2022)
Bona imibono emihle kakhulu yokuthi ungayihlobisa kanjani indlu yakho ngePhasika. Ungenza ukuhlobisa kwe-Easter ngezandla zakho, noma ungakwazi ukuhlobisa indlu ngosizo lwezindlela ezithuthukisiwe
Izitshalo eziyisi-6 eziphezulu zasendlini ezizoletha uthando nenjabulo yomndeni ekhaya lakho (2022)
Sethula izimbali zasendlini zenjabulo yomndeni, inhlalakahle yasekhaya nothando ekhaya. Qiniseka ukuthi unake kubo. Kwangathi, ngenxa yezitshalo ezingcono kakhulu zasendlini, ukuqondana njalo kubusa emndenini wakho
Okufanele ukwenze ukuvimbela ama-tights ukuthi angadabuki: 8 ama-hacks empilo asebenzayo (2022)
Yini okufanele uyenze ukuze ugweme ukuklebhula ama-tight enayiloni? Ingabe kuyiqiniso ukuthi izicathulo zenayiloni ziba namandla ekuqandeni nokuthi ungakhetha kanjani ama-tights amahle?
Indlela yokuhlobisa itafula lePhasika: imibono emangalisayo evela ku-stylist wangaphakathi (2022)
Ukwenza i-Easter ingabi mnandi kuphela, kodwa futhi ibe yinhle, sebenzisa ukukhethwa kwethu kwemibono ethakazelisayo yokuhlobisa itafula. Lawa macebiso alula, kodwa azoletha injabulo enkulu kuwo wonke umndeni
Izitshalo ezi-5 zasendlini ezilimaza inhlalakahle yomndeni (2022)
Kupholile uma kunezitshalo ezinhle endlini. Kodwa kuvela ukuthi ezinye izitshalo zasendlini zingaba yingozi futhi zilimaze injabulo yomkhaya
8 izitshalo zasendlini ezizokusindisa ekucindezelekeni (2022)
Kunemibala eminingi engasiza ekudambiseni ukucindezeleka futhi ithuthukise isimo sakho sengqondo. Sizokutshela ukuthi yiziphi izimbali okudingeka uzigcine endlini ukuze uzole, usebenze kahle futhi ulale kangcono
Izincwadi ezi-4 ezingafundwa omama abakhulelwe (2022)
Ngesikhathi sokukhulelwa, abaningi besaba into engaziwa. Siqoqe izincwadi ezi-4 zomama abakhulelwe, ngenxa yokuthi uzofunda ngezintelezi nobunzima bezinyanga eziyisishiyagalolunye ezizayo, amaqiniso athakazelisayo ngokukhulelwa nokubeletha
I-Easter ekhaya: imibono engcono kakhulu yabantu abadala kanye nezingane, indlela yokuzijabulisa neholide elithakazelisayo (2022)
Ungaba kanjani nokuzijabulisa, iholide eliqhakazile lePhasika lika-2021, naphezu kokuvalelwa komuntu yedwa? Sikuqoqele izimfihlo ezimbalwa zokuthi uzinikele kanjani ku-pasque futhi uhlele ukuzijabulisa ongasoze wakukhohlwa. Thatha izikhali
Amathiphu angu-3 avela kubaklami okuthi ungahlobisa kanjani ikhaya lakho kalula nangobuhle ngoSuku Lwezithandani (2022)
Thola ukuthi ungahlobisa kanjani kahle igumbi ngoSuku Lwezithandani ngaphandle kwamakhandlela ephethini namabhaluni amise okwenhliziyo. Sinikeza imibono yesimanje
Amafilimu angu-3 awusizo okuqinisa ubudlelwano futhi agcine imizwa yakho ishisa (2022)
Amafilimu aphathelene nobudlelwano asiza abashadile ukuxazulula izinkinga ezinqwabelene ngendlela ephumelelayo kuneseshini nodokotela wezengqondo. Kubalulekile ukubukela amafilimu ndawonye futhi ungakhohlwa ukuxoxa ngalokho enikubonile
Ukwelashwa okujabulisayo: indlela yokukhetha i-sanatorium enhle yengane yakho (2022)
Uma ingane yakho ivame ukugula, ihlushwa uhlobo oluthile lwesifo esingelapheki, ngezikhathi ezithile kuyadingeka ukuhlela ukuphumula kwengane ku-sanatorium. Sikutshela ukuthi ungakhetha kanjani i-sanatorium enhle yengane
Indlela yokukhetha isibuko sokugezela: imiyalelo yesinyathelo ngesinyathelo (2022)
Yonke intombazane ithanda indlu yokugezela, ngoba leli yithuba elihle lokuba wedwa nawe. Indlela yokukhetha isibuko sokugezela - funda endabeni yethu
Hlobo luni lwe-tile lokukhetha endlini yokugezela encane: imibono eyi-15 ethakazelisayo (2022)
Bona ukuthi ungahlobisa kanjani ingaphakathi lendlu yokugezela ezithakazelisayo nesitayela
Ongahamba nakho ohambweni: uhlu lokuhlola lwabahambi (2022)
Njalo ngaphambi kohambo, ucabanga ukuthi yini okufanele uhambe nayo nokuthi ungakhohlwa kanjani noma yini ebalulekile? Uhlu lokuhlola luzokusiza ukuthi ubhale ngokushesha uhlu lwezinto ezibalulekile ohambeni
Izincwadi ezi-4 ezizokusiza wenze ukuhlala kwakho ekhaya kukhululeke kakhudlwana (2022)
Ikhaya elikahle linomoya wokunethezeka nokuthula. Siqoqe izincwadi ezivela kubabhali abadumile mayelana nedizayini nokupheka ezizokusiza ukwenza ukuhlala kwakho ekhaya kukhululeke kakhudlwana
Izincwadi eziyi-10 ezikhuluma ngokusondelana esezisize imibhangqwana eminingi (2022)
Ukukhethwa kwezincwadi ezinhle kakhulu zobuciko bocansi. Sihlanganise ukukhethwa kwezincwadi ezingcono kakhulu ezikhuluma ngocansi, kusukela ezindleleni ezintsha zokuzijabulisa kuye ebunkingeni obungokwengqondo bokusondelana
Izincwadi eziyi-15 ze-psychology ezingakusiza ukuthi ulungise imizwa yakho nemizwa yakho (2022)
Izincwadi zePsychology zisiza ukuxazulula imizwa nemizwelo yakho, thatha igxathu ekuzuzeni ukuzwana kwangaphakathi nokwanelisa izifiso zakho. Eyodwa eyahlanganisa uhlu lwezincwadi eziyosiza ekujabuleni nasekuzuzeni umoya wokunqoba
Omama abakhulu abazalwa: Indaba kaVictoria Mostovenko yobudedengu bezokwelapha kanye nephupho liyafezeka (2022)
UVictoria Mostovenko uthanda kakhulu ukubhaka. Futhi nokwenza izipho. Kodwa ngaphezu kwakho konke, uyayithanda indodakazi yakhe eneminyaka engu-3 ubudala uSofiyka. Ndawonye balwa kanzima nokuxilongwa kwengane - i-cerebral palsy kanye nesifo sokuwa
Indlela yokukhetha izingubo zokulala ezifanele ukuze ulale kahle (2022)
Ukulala okuhle kuyisihluthulelo sokulala ngokunethezeka nokunempilo. Indlela yokukhetha ilineni lokulala, yini okufanele uyibheke? Lo mbuzo uphendulwe ngumhlobisi womklami uSvetlana Sabri
Amafilimu angu-5 aphezulu mayelana nokupheka, ngemva kokubuka ozofuna ukuwapheka (2022)
Sethula iqoqo lamafilimu ahamba phambili amayelana nokudla, izindawo zokudlela, abapheki abangochwepheshe kanye nokuzifundisa. Agcona ama-receptors futhi avuselele isifiso sokudla, anikeze imizwa ecacile futhi ashiye ukunambitheka okumnandi